Kuedza Livefyre Sidenote yekupindura | Martech Zone
Isu takatama pakati pekutaura masystem kashoma pane Martech Zone. Neraki, ese mapuratifomu akakosha anoenderana mazwi (isu hatishandise kana asinga). Makomendi ari kuve musoro wenyaya mazuva ano sezvo comment spam yakapararira uye dzakawanda dzekutaurisa zvine mutsindo dziri kuitika pasiri pamhepo, zvichitungamira mamwe mabloggi akakurisa kudzima kupindura zvachose.
Ndine shamwari Lorraine Ball pane ino inoti:
Kwandiri, bhurogu isina makomendi yakafanana nechikoro chisina vadzidzi kana konzati isina vateereri. Kwandiri, kubatanidzwa pamwe nekudyidzana nevaverengi chinhu chakakosha kupa mabhurogu, uye chaicho chikuru chinobatsira kublogga.
Ini zvakare handina kumbobvira ndave fan wekusiya zano nekuti iro kunyanya hazvishande. Iko hakuna toni yemashoko neese posvo pa Martech Zone, asi kana zviripo zvinogara zvichikosha kwandiri. Ini handina basa nekuti ini ndinofanirwa kubata chiuru spammy makomendi ekuchera nekuwana imwe nugget - ichiri kukosha.
Izvo zvakati, sezvo hurukuro zhinji dziri kuitika kubva kublog - Ndinoda kuti vaverengi vedu vawane uye vabatanidze hurukuro idzodzo. Disqus ine zvimwe zvakanaka maitiro ekuteverana asi haina kunyatso kukodzera kudiwa kwekuziva kuti ndiani uye kana zvirimo zvirikugoverwa nekutaurwa nezvazvo. Ndakataura izvozvo muhurukuro ne Nicole Kelly uye akataura izvozvo Live Guys akazviita - saka ndichaenda kunopa yavo system imwe pfuti.
Vakawedzerawo Sidenotes - nzira yekutora akatorwa kana chikamu wozotaura pamusoro pazvo munharaunda kana munharaunda. Saka - makomendi haisi chinhu chaunongoita kana iwe waverenga zvese zvakatumirwa, ikozvino unogona kuisa hurukuro yako zvakananga mukati mezviri mukati!
Kana uchiifarira, ndiudze! 🙂
Tags: blog commentskomendakupinduraDisqushupenyu